मार्च मा टोकियो मौसम! तापमान, वर्षा, कपडा - Best of Japan
अगाडिको दृश्य बाहिर दर्शनीय दृश्य सेन्सोजी मन्दिर प्रवेश गर्नुहोस् मार्च, असकुसा, टोक्यो = शटरस्टकमा सेन्सोजी मन्दिरमा कतारमा रहेका विश्वासीहरूसँगै।
जापानी वसन्त कसरी रमाइलो गर्ने! चेरी फूल, नेमोफिला आदि। >
जापानमा मार्च! दुबै जाडो र वसन्तको आनन्द लिनुहोस्! >
मार्च मा टोकियो मौसम! तापमान, वर्षा, लुगा
टोकियोमा, मौसम अस्थिर छ किनकि मार्च हिउँदबाट वसन्त toतुमा सर्ने समय हो। यदि तपाईं मार्चमा टोकियो यात्रा गर्ने योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने, कृपया आफ्नो छाता नबिर्सनुहोस्। यस पृष्ठमा, म तपाईंलाई जापान मौसम संघ द्वारा जारी गरिएको मौसम डाटाको आधारमा मार्चको महीनामा टोकियोको मौसमको बारेमा बताउनेछु।
तल टोकियोमा मासिक मौसमको बारेमा लेखहरू छन्। तपाईंले स्लाइडरबाट अधिक जान्न चाहानुभएको महिना चयन गर्नुहोस्।
जनवरीमा, टोकियो धेरै चिसो छ, त्यसैले तपाईंलाई कोट वा जम्पर चाहिन्छ। मौसम अनुरूप छ र तपाइँ एक राम्रो घामको दिन अधिक अक्सर अनुभव गर्नुहुनेछ। त्यहाँ लगभग कुनै हिउँ छैन, तर यदि यो सुन्न गयो भने रेल सेवा निलम्बन हुन सक्छ। यस पृष्ठमा, म जनवरीमा टोकियो मौसम डेटा छलफल गर्नेछु। यो जानकारी को माध्यम बाट, म आशा गर्दछु कि तपाईले जनवरीमा टोकियो मौसमको एक विचार प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तल टोकियोमा मासिक मौसमको बारेमा लेखहरू छन्। यदि तपाइँ अधिक जान्न चाहानुहुन्छ भने लेखमा क्लिक गर्नुहोस्। तल जनवरीमा ओसाका र होक्काइडोको मौसमका बारे लेखहरू छन्। यदि तपाईं होक्काइडो र टोकियो जान चाहानुहुन्छ भने, कृपया नोट गर्नुहोस् कि होक्काइडोको मौसम टोकियो भन्दा बिलकुलै फरक छ। जाडोको कपडाका लागि, कृपया निम्न लेखमा सन्दर्भ गर्नुहोस्। जनवरीमा टोकियोमा सामग्री वेटर (सिंहावलोकन) टोकियो मौसम जनवरी (२०१ 2018) को बीचमा टोकियो मौसम जनवरी (२०१ 2018) टोकियो मौसम जनवरीको अन्तमा (२०१)) जनवरीमा टोकियोको मौसम (अवलोकन) ग्राफ: टोकियोमा तापमान परिवर्तन जनवरीमा - जापान मौसम विज्ञान एजेन्सी द्वारा जारी डाटाको आधारमा। दुबै उच्च र न्यून तापमान डेटा विगत years० बर्षमा औसत छ (१ 2018 30१-२०१०) टोकियो जनवरीमा एकदम चिसो छ। होक्काइडो जस्तो हिउँ धेरै छैन, तर त्यहाँ त्यस्तो दिनहरू छन् जब सबै भन्दा कम तापक्रम ठण्डा भन्दा कम हुन्छ। दिनको समयमा पनि, प्राय: व्यक्ति बाहिर कोट बिना बाहिर धेरै समय खर्च गर्न सक्दैन। यो जनवरी मा धेरै वर्षा छैन। यसको सट्टामा तपाईले धेरै राम्रा नीलो स्काइहरू अपेक्षा गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने यो वर्षा हुँदैन, हावा ...
टोकियोमा फेब्रुअरीमा धेरै घमाइलो दिनहरू हुन्छ तर यो प्राय: धेरै चिसो हुन्छ। यो विशेष गरी फेब्रुअरीको पहिलो आधा मा चिसो छ, त्यसैले आफ्नो कोट बिर्सनु हुँदैन सावधान रहनुहोस्। जापान मौसम संघ द्वारा जारी गरिएको फेब्रुअरी २०१ the को मौसम डेटाका आधारमा तपाईले कस्तो किसिमको कपडा प्याक गर्नुपर्दछ भन्ने बारेमा यस पृष्ठमा म केही उपयोगी जानकारी प्रदान गर्दछु। तल टोकियोमा मासिक मौसमको बारेमा लेखहरू छन्। तपाइँलाई जान्न चाहानु भएको महिना चयन गर्न स्लाइडर प्रयोग गर्नुहोस्। तल फेब्रुअरीमा ओसाका र होक्काइडोको मौसमका बारे लेखहरू छन्। यदि तपाईं होक्काइडो साथ साथै टोकियो जाने योजनामा ​​हुनुहुन्छ भने, कृपया नोट गर्नुहोस् कि होक्काइडोको मौसम टोकियो भन्दा बिलकुलै फरक छ। जाडोको कपडाका लागि, कृपया निम्न लेखमा सन्दर्भ गर्नुहोस्। फेब्रुअरीमा टोकियोमा सामग्री वेटर (सिंहावलोकन) टोकियो मौसम फेब्रुअरी (२०१)) को बीचमा टोकियो मौसम फेब्रुअरी (२०१)) को बीचमा टोकियो मौसम फेब्रुअरीमा (२०१)) टोकियोमा फेब्रुअरीमा मौसम (अवलोकन) ग्राफ: टोकियोमा तापमान परिवर्तन फेब्रुअरीमा - जापान मौसम विज्ञान एजेन्सी द्वारा जारी डाटाको आधारमा। दुबै उच्च र न्यून तापमान डेटा विगत years० बर्षमा औसत हो (१ 2018 2018१-२०१०) सँगै जनवरी, फेब्रुअरी जापानको सबैभन्दा चिसो अवधि हो। प्रारम्भिक फेब्रुअरी र मध्य फेब्रुअरी, थोरै तापक्रम जाडोबाट तल झर्नु यो असामान्य हुँदैन। त्यहाँ धेरै घमाइलो दिनहरू छन्, तर हावा कडा हुँदा यो धेरै चिसो हुन्छ। यो विरलै सुक्छ, तथापि, यो एक पटक यसले यातायात गडबड गर्दछ र ट्रेनहरू ढिलाइ हुन सक्छ। फेब्रुअरीको अन्त्यमा, यो सुरू हुन्छ ...
टोकियोमा मौसम अस्थिर छ किनकि मार्च जाडोबाट वसन्त toतुमा सर्ने समय हो। यदि तपाईं मार्चमा टोकियो यात्रा गर्ने योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने, कृपया आफ्नो छाता नबिर्सनुहोस्। यस पृष्ठमा, म तपाईंलाई जापान मौसम संघ द्वारा जारी मौसम डाटाको आधारमा मार्चको महिनामा टोकियोको मौसमको बारेमा बताउनेछु। तल टोकियोमा मासिक मौसमको बारेमा लेखहरू छन्। तपाईंले स्लाइडरबाट अधिक जान्न चाहानुभएको महिना चयन गर्नुहोस्। तल मार्चमा ओसाका र होक्काइडोको मौसम बारे लेखहरू छन्। यदि तपाईं होक्काइडोको साथसाथ ओसाका जाने योजनामा ​​हुनुहुन्छ भने, कृपया नोट गर्नुहोस् कि होक्काइडोको मौसम टोकियो भन्दा बिलकुलै फरक छ। मार्चमा टोकियोमा सामग्री वेटर (सिंहावलोकन) टोकियो मौसम मार्च (२०१ early) को बीचमा टोकियो मौसम मार्च (२०१)) को टोकियो मौसम मार्चको अन्तमा (२०१)) मार्चमा टोकियोको मौसम (अवलोकन) ग्राफ: टोकियोमा तापमान परिवर्तन मार्चमा - जापान मौसम विज्ञान एजेन्सी द्वारा जारी डाटाको आधारमा। दुबै उच्च र न्यून तापमान डेटा विगत years० बर्षको औसत हो (१ 2018 2018१-२०१०) मार्चमा, न्यानो हावा दक्षिणबाट बग्दछ। यस कारणका लागि, हावा मार्चमा सामान्यतया बलियो हुन्छ। त्यहाँ धेरै बादल दिन छन् र यो धेरै वर्षा हुन्छ। अधिकतम तापमान कहिलेकाँही २० डिग्री भन्दा बढि हुन्छ। यद्यपि यो पूरै वसन्त होईन। निम्न दिन कहिलेकाँही लगभग १० डिग्री गिराउन सक्छ र तपाईं चिसो संग कम्पन हुन सक्नुहुन्छ। तातो र चिसो मौसम को एक चक्र को माध्यम बाट यो बिस्तारै यस प्रकार वसन्त हुनेछ। मा ...
अप्रिलमा टोकियो मौसम! तापमान, वर्षा, लुगा
यदि तपाईं अप्रिलमा टोकियो जानुभयो भने, तपाईंले सायद रमाईलो यात्राको आनन्द लिनुहुनेछ। टोकियो अप्रिल मा एक हल्का वसन्त मौसम छ। तापक्रम सहज छ। अप्रिलको शुरुमा तपाईले चेरी फूलहरूको पनि आनन्द लिन सक्नुहुन्छ। जापान मौसम संघ द्वारा जारी मौसम डेटा को आधारमा, म अप्रिल मा टोकियो मौसम मा एक संक्षिप्त परिचय दिनेछु। तल टोकियोमा मासिक मौसमको बारेमा लेखहरू छन्। तपाईको बारेमा अधिक जान्न चाहानु भएको महिना चयन गर्न स्लाइडर प्रयोग गर्नुहोस्। तल अप्रिलमा ओसाका र होक्काइडोको मौसम बारे लेखहरू छन्। यदि तपाईं होक्काइडो साथ साथै टोकियो जाने योजनामा ​​हुनुहुन्छ भने, कृपया नोट गर्नुहोस् कि होक्काइडोको मौसम टोकियो भन्दा बिलकुलै फरक छ। वसन्तका लुगाहरूका लागि, कृपया निम्न लेखमा सन्दर्भ गर्नुहोस्। टोकियोमा अप्रिलमा (अवलोकन) टोकियो मौसम अप्रिल (२०१ 2018) मा टोकियो मौसम अप्रिल (२०१)) को बीचमा टोकियो मौसम अप्रिल (२०१ 2018) को टोकियो मौसम अप्रिलमा टोकियोको मौसम (अवलोकन) ग्राफ: टोकियोमा तापमान परिवर्तन अप्रिलमा - जापान मौसम विज्ञान एजेन्सी द्वारा जारी डाटाको आधारमा। दुबै उच्च र न्यून तापमान डेटा विगत years० बर्षको औसतमा हो (१ 2018 30१-२०१०) मार्चको अन्तमा, टोकियोमा तापमानमा उल्लेखनीय वृद्धि हुनेछ। अप्रिलमा, त्यहाँ दिनहरू हुन्छन् जब अधिकतम तापमान २ 1981 डिग्री भन्दा बढी हुन्छ। यो तातो छ, त्यसैले तपाईले शहरमा कोट लगाएको व्यक्तिलाई भेट्नु हुन्न। जे होस्, त्यहाँ दिनहरू छन् जब यो रातको चिसो हुन्छ। तसर्थ, यदि तपाइँ राती चेरि फूलहरू हेर्न जानुहुन्छ, वसन्त कोट वा जम्पर लिनुहोस्। जसमा यो वर्षा हुन सक्छ ...
मे मा टोकियो मौसम! तापमान, वर्षा, लुगा
यदि तपाईं मेमा टोकियो जानु भयो भने मौसम धेरै सहज छ। यो दर्शनीय ठाउँहरू भ्रमण गर्नका लागि उत्तम मौसम हो, त्यसैले सम्भव भएसम्म फाइदा लिनुहोस्। यद्यपि मौसम ढिलो मेमा अस्थिर हुनेछ। यस पृष्ठमा, म जापान मौसम संघ द्वारा जारी मौसम डेटाको आधारमा मेमा टोकियोको मौसमको बारेमा छलफल गर्नेछु। तल टोकियोमा मासिक मौसमको बारेमा लेखहरू छन्। तपाईको बारेमा अधिक जान्न चाहानु भएको महिना चयन गर्न स्लाइडर प्रयोग गर्नुहोस्। तल मेमा ओसाका र होक्काइडोको मौसमका बारे लेखहरू छन्। यदि तपाईं होक्काइडो साथ साथै टोकियो जाने योजनामा ​​हुनुहुन्छ भने, कृपया नोट गर्नुहोस् कि होक्काइडोको मौसम टोकियो भन्दा बिलकुलै फरक छ। वसन्तका लुगाहरूका लागि, कृपया निम्न लेखमा सन्दर्भ गर्नुहोस्। टोक्योमा मे (मा (ओभरभ्यू) टोकियो मौसम मे (२०१ 2018) मा टोकियो मौसम मे (२०१ 2018) को बीचमा टोकियो मौसम मे (२०१ 2018) टोकियोको मौसम मेमा (अवलोकन) ग्राफ: टोकियोमा तापमान परिवर्तन मेमा - जापान मौसम विज्ञान एजेन्सी द्वारा जारी डाटाको आधारमा। दुबै उच्च र न्यून तापमान डेटा विगत years० बर्षको औसत हो (१ 30 1981१-२०१०) यदि तपाईं मेमा टोकियो जानुहुन्छ भने तपाईले धेरै आरामदायी यात्राको आनन्द लिनुहुनेछ। माथिको ग्राफले देखाउँदछ, मे र मध्य मेमा, टोकियोमा दिनहरू तातो वा धेरै चिसो हुँदैनन्। व्यायाम गर्दा, तपाईंले पसिना फुटाउन सक्नुहुन्छ। यद्यपि यो अझै गर्मी जस्तो तातो छैन। तपाईं छोटो-बाहिरी शर्ट लगाएर ठीक हुन सक्नुहुन्छ ...
जून मा टोकियो मौसम! तापमान, वर्षा, लुगा
टोकियोमा जुन महिनामा धेरै वर्षा दिनहरू छन्। आर्द्रता उच्च छ र तापमान स्थिर रूपमा बढ्दछ। तसर्थ, जुन मा, तपाईं संग केहि कपडा छ कि तपाईं को उपयोग गर्न सक्नुहुनेछ जब म मौसम muggy। यस वर्षाको मौसममा छाता पनि आवश्यक हुन्छ। यस पृष्ठमा, जापान मौसम संघ द्वारा जारी मौसम डेटा सन्दर्भमा, म तिमीलाई जून को टोकियो मा मौसम परिचय गराउनेछु। तल टोकियोमा मासिक मौसमको बारेमा लेखहरू छन्। तपाईको बारेमा अधिक जान्न चाहानु भएको महिना चयन गर्न स्लाइडर प्रयोग गर्नुहोस्। तल जूनमा ओसाका र होक्काइडोको मौसमको बारेमा लेखहरू छन्। यदि तपाईं होक्काइडो साथ साथै टोकियो जाने योजनामा ​​हुनुहुन्छ भने, कृपया नोट गर्नुहोस् कि होक्काइडोको मौसम टोकियो भन्दा बिलकुलै फरक छ। वसन्त र ग्रीष्म clothesतुका लुगाहरूका लागि, कृपया निम्न लेखहरूमा सन्दर्भ गर्नुहोस्। जूनमा टोकियोमा सामग्री वेदर (सिंहावलोकन) जून २०१ early (२०१ 2018) को बीचमा टोकियो मौसम जून २०१ 2017 (२०१ 2018) को बीचमा टोकियो मौसम जून २०१ 2017 (२०१ 2018) को टोकियो मौसम जून २०१ Tok (२०१ 2017) मा टोकियोको मौसम जून (अवलोकन) ग्राफ: तापमान जूनमा टोकियोमा परिवर्तन ※ जापान मौसम विज्ञान एजेन्सी द्वारा जारी डाटाको आधारमा। दुबै उच्च र न्यून तापमान डेटा विगत years० बर्षको औसतमा हो (१ 30 1981१-२०१०) टोकियोमा, वर्षा usuallyतु प्राय: जुन मध्यको बीचमा सुरू हुन्छ। वर्षाको मौसम करिब एक महिना रहन्छ। त्यस पछि, जुलाई २० तारिखदेखि, साँचो गर्मी टोकियो आउनेछ। जूनको अन्तमा, तापमान degrees० डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी हुन सक्छ। त्यस समयमा छोटो-बाहिरी गर्मीका कपडाहरू भन्दा राम्रो हुन्छ ...
जुलाई मा टोकियो मौसम! तापमान, वर्षा, लुगा
जापान एक शीतोष्ण देश हो, तर जुलाईदेखि अगस्टसम्म यो उष्णकटिबंधीय देशमा परिवर्तन हुन्छ भन्न मिल्दैन। टोकियोमा दिनको अधिकतम तापक्रम 35 2018 डिग्री भन्दा बढि असामान्य हुँदैन। जसरी डामर सडकहरू घामको तापले तापिन्छ यो वास्तवमै यो भन्दा राम्रो छ जस्तो लाग्छ। यस पृष्ठमा, म जुलाई महिनामा टोकियो मा यात्रा को बारे मा मौसम जानकारी प्रदान गर्नेछ। तल टोकियोमा मासिक मौसमको बारेमा लेखहरू छन्। तपाईको बारेमा अधिक जान्न चाहानु भएको महिना चयन गर्न स्लाइडर प्रयोग गर्नुहोस्। तल जुलाईमा ओसाका र होक्काइडोको मौसमका बारे लेखहरू छन्। यदि तपाईं होक्काइडो साथ साथै टोकियो जाने योजनामा ​​हुनुहुन्छ भने, कृपया नोट गर्नुहोस् कि होक्काइडोको मौसम टोकियो भन्दा बिलकुलै फरक छ। गर्मीको कपडाका लागि, कृपया निम्न लेखमा सन्दर्भ गर्नुहोस्। जुलाईमा टोकियोमा सामग्री वेटर (अवलोकन) जुलाईको सुरूमै टोकियो मौसम (२०१ 2018) जुलाईको बीचमा टोकियो मौसम (२०१ 2018) जुलाईको अन्तमा टोकियो मौसम (२०१ 30) जुलाईमा टोकियोको मौसम (अवलोकन) ग्राफ: टोकियोमा तापमान परिवर्तन जुलाईमा - जापान मौसम विज्ञान एजेन्सी द्वारा जारी डाटाको आधारमा। दुबै उच्च र न्यून तापमान डेटा विगत years० बर्षमा औसत छ (१ 1981 2010१-२०१०) जुलाईमा टोकियो साँच्चै तातो छ र ग्लोबल वार्मिंगको प्रभावका कारण यो पहिले भन्दा बढी तातो हुँदै गइरहेको छ। असंख्य वातानुकूलनहरू सञ्चालनमा छन् र शहर केन्द्र निकासबाट तातो हुँदैछ। तल जापान मौसम संघ द्वारा घोषित टोकियोको मौसम विज्ञान डेटा। ...
टोक्यो अगस्तमा मौसम! तापमान, वर्षा, लुगा
टोकियो मा, यो अगस्त मा धेरै तातो छ। होक्काइडो जस्तो नभई टोकियोमा आर्द्रता धेरै नै छ। त्यसोभए, यदि तपाईं अगस्तमा टोकियो यात्रा गर्नुहुन्छ भने, हावामा गर्मीको कपडा ल्याउनुहोस्। एयर कन्डिसनहरू भवनमा सुनिरहेझैं, तपाईंलाई पनि ज्याकेट चाहिन्छ। अगस्टमा, आँधीले टोकियोमा आक्रमण गर्न सक्दछ। भर्खरको मौसम पूर्वानुमानसँग सावधान हुनुहोस्। यस पृष्ठमा, म अगस्तमा टोकियोको मौसम प्रस्तुत गर्नेछु। मैले यस समयमा लिइएको फोटोहरूको पनि पोष्ट गरें, कृपया सन्दर्भ गर्नुहोस्। तल टोकियोमा मासिक मौसमको बारेमा लेखहरू छन्। तपाईको बारेमा अधिक जान्न चाहानु भएको महिना चयन गर्न स्लाइडर प्रयोग गर्नुहोस्। तल अगस्तमा ओसाका र होक्काइडोको मौसमका बारे लेखहरू छन्। यदि तपाईं होक्काइडो साथ साथै टोकियो जाने योजनामा ​​हुनुहुन्छ भने, कृपया नोट गर्नुहोस् कि होक्काइडोको मौसम टोकियो भन्दा बिलकुलै फरक छ। गर्मीको कपडाका लागि, कृपया निम्न लेखमा सन्दर्भ गर्नुहोस्। अगस्तमा टोकियोमा सामग्री वेटर (सिंहावलोकन) टोकियो मौसम अगस्टको (२०१ early) टोकियो मौसम अगस्टको बीचमा (२०१ late) टोकियो मौसम अगस्टको (२०१ 2018) अगस्तमा टोकियोको मौसम (अवलोकन) ग्राफ: टोकियोमा तापमान परिवर्तन अगस्तमा - जापान मौसम विज्ञान एजेन्सी द्वारा जारी डाटाको आधारमा। दुबै उच्च र न्यून तापमान डेटा विगत years० बर्षमा औसत हो (१ 2018 2018१-२०१०) अगस्तको टोकियोमा दिनको अधिकतम तापमान लगभग हरेक दिन degrees० डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी छ। हालसालै यो 30 1981 डिग्री पार गरी करीव nearly० डिग्री पुगेको छ। आर्द्रता पनि उच्च छ। यदि यो सुक्खा छ, मलाई लाग्छ कि यो अझै खर्च गर्न सजिलो छ, ...
अक्टुबरमा टोकियो मौसम! तापमान, वर्षा, लुगा
यदि तपाईं अक्टुबरमा टोकियोमा यात्रा गर्ने योजना गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो उत्तम चीज हो, म दृढ रूपमा सहमत छु। अक्टुबरमा टोकियो सहज छ। तपाईं विभिन्न स्थानहरूको वरिपरि यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ। यस पृष्ठमा, म अक्टुबरमा टोकियोको मौसम वर्णन गर्दछु। तल टोकियोमा मासिक मौसमको बारेमा लेखहरू छन्। तपाईको बारेमा अधिक जान्न चाहानु भएको महिना चयन गर्न स्लाइडर प्रयोग गर्नुहोस्। तल अक्टोबरमा ओसाका र होक्काइडोको मौसमका बारे लेखहरू छन्। यदि तपाईं होक्काइडो साथ साथै टोकियो जाने योजनामा ​​हुनुहुन्छ भने, कृपया नोट गर्नुहोस् कि होक्काइडोको मौसम टोकियो भन्दा बिलकुलै फरक छ। शरद clothesतुका लुगाहरूका लागि, कृपया निम्न लेखमा सन्दर्भ गर्नुहोस्। अक्टुबरमा टोकियोमा सामग्री वेदर (अवलोकन) अक्टोबर (२०१ October) को बीचमा टोकियो मौसम अक्टोबर (२०१ 2017) को बीचमा टोकियो मौसम अक्टुबरको अन्तमा (२०१ 2017) अक्टूबरको टोकियोको मौसम (अवलोकन) ग्राफ: टोकियोमा तापमान परिवर्तन अक्टुबरमा - जापान मौसम विज्ञान एजेन्सी द्वारा जारी डाटाको आधारमा। दुबै उच्च र न्यून तापमान डेटा विगत years० बर्षमा औसत हो (१ 2017 30१-२०१०) अक्टुबरमा त्यहाँ धेरै दिनको राम्रो मौसम छ र तापक्रम सहज छ। यद्यपि यसमा थोरै वर्षा भएको छ, यो खर्च गर्न सजिलो छ, त्यहाँ श doubt्का छैन जुन यो एक भ्रमणको मौसम हो। अक्टुबरको शुरुमा, आँधीले अझै आक्रमण गर्न सक्दछ। तपाईं यस बारे सावधान हुनुपर्छ। यद्यपि त्यस बाहेक अक्टुबरको मौसम सामान्यतया शान्त हुन्छ। टोकियो शहरको केन्द्रमा, शरद पातहरु अझै शुरू भएको छैन। यद्यपि शरद पातहरू सुरु भएनन्, त्यहाँ त्यहाँ ...
यस पृष्ठमा, म नोभेम्बरमा टोकियोमा मौसम प्रस्तुत गर्नेछु। नोभेम्बरमा मौसम आरामदायक छ। तापक्रम न तातो छ न चिसो। यो भन्न सकिन्छ कि यो टोकियो रमाइलो गर्न सबै भन्दा राम्रो मौसम हो। नोभेम्बर मध्य देखि, तपाईं मध्य टोकियो मा पनि, सुंदर शरद leavesतु पातहरु देख्न सक्नुहुन्छ। तल टोकियोमा मासिक मौसमको बारेमा लेखहरू छन्। तपाईको बारेमा अधिक जान्न चाहानु भएको महिना चयन गर्न स्लाइडर प्रयोग गर्नुहोस्। तल नोभेम्बरमा ओसाका र होक्काइडोको मौसमका बारे लेखहरू छन्। यदि तपाईं होक्काइडो साथ साथै टोकियो जाने योजनामा ​​हुनुहुन्छ भने, कृपया नोट गर्नुहोस् कि होक्काइडोको मौसम टोकियो भन्दा बिलकुलै फरक छ। शरद clothesतुका लुगाहरूका लागि, कृपया निम्न लेखमा सन्दर्भ गर्नुहोस्। टोकियोमा नोभेम्बरमा (अवलोकन) टोकियो मौसम नोभेम्बर (२०१ 2017) को बीचमा टोकियो मौसम नोभेम्बर (२०१ 2017) को बीचमा टोकियो मौसम नोभेम्बर (२०१ 2017) नोभेम्बरको टोकियो मौसम (नोभेम्बर) ग्राफ: टोकियोमा तापमान परिवर्तन नोभेम्बरमा - जापान मौसम विज्ञान एजेन्सी द्वारा जारी डाटाको आधारमा। दुबै उच्च र न्यून तापमान डेटा विगत years० बर्षमा औसत हो (१ 30 1981१-२०१०) नोभेम्बरमा, टोकियोको मौसम शान्त छ। तापक्रम राम्रो छ। र आर्द्रता कम छ। त्यसोभए तपाईले धेरै आरामदायी यात्राको आनन्द लिनुहुनेछ। एउटा चीज जुन तपाईंले सावधान हुनु आवश्यक छ दृश्य स्थलहरूको भीड हो। किनकि यो त्यत्ति आरामदायी मौसम हो, साथै तपाईं पनि धेरै जापानी र विदेशी पर्यटक टोकियो आउँदछन्। नतिजा स्वरूप, लोकप्रिय होटलहरूमा चाँडै कुनै पनि खाली ठाउँहरू हुनेछन्। लोकप्रिय पर्यटन स्थलहरूमा, तपाईं ...
तल मार्चमा ओसाका र होक्काइडोको मौसम बारे लेखहरू छन्। यदि तपाईं होक्काइडोको साथसाथ ओसाका जाने योजनामा ​​हुनुहुन्छ भने, कृपया नोट गर्नुहोस् कि होक्काइडोको मौसम टोकियो भन्दा बिलकुलै फरक छ।
यदि तपाईं मार्चमा ओसाका जानुहुन्छ भने तपाईको सुटकेसमा कस्तो खालको कपडा प्याक गर्नु पर्छ? मार्चमा, ओसाका जाडोदेखि वसन्त transitionतुमा संक्रमणमा छन्। त्यहाँ न्यानो दिनको साथ समयहरू छन्, तर त्यहाँ धेरै चिसो दिनहरू पनि छन्, त्यसैले कृपया जाम्परहरू जस्तो जाडोको लुगा नभुल्नुहोस्। यस पृष्ठमा, म मार्चमा ओसाकाको मौसम वर्णन गर्छु। ओसाका मासिक मौसमको बारेमा तल लेखहरू छन्। तपाइँले अधिक जानकारी चाहानुभएको महिनाको लागि स्लाइडरबाट चयन गर्नुहोस्। तल मार्चमा टोकियो र होक्काइडोको मौसमका बारे लेखहरू छन्। यदि तपाईं होक्काइडोको साथसाथ ओसाका जाने योजनामा ​​हुनुहुन्छ भने, कृपया नोट गर्नुहोस् कि होक्काइडोको मौसम ओसाका भन्दा केही फरक छ। मार्चमा ओसाकामा सामग्री वेदर (अवलोकन) ओसाका मार्चको शुरुमा मौसम (२०१)) ओसाका मौसम मार्चको बीचमा (२०१)) ओसाका मौसम मार्चको अन्तमा (२०१)) मार्चमा ओसाकाको मौसम (अवलोकन) ग्राफ: ओसाकामा तापमान परिवर्तन मार्चमा - जापान मौसम विज्ञान एजेन्सी द्वारा जारी डाटाको आधारमा। दुबै उच्च र न्यून तापमान डेटा विगत years० बर्षको औसत हो (१ 2018 2018१-२०१०) ओसाकाको मौसम लगभग टोकियो जस्ता जापानमा होन्शुको जस्तै छ। अन्य शहरहरूमा जस्तै मार्चमा मौसम थोरै अस्थिर छ। त्यहाँ सम्भावित कडा बतासको साथ तुलनात्मक रूपमा धेरै बादल र वर्षाका दिनहरू छन्। मार्चको सुरूमा, त्यहाँ धेरै चिसो दिनहरू हुन्छन्। जे होस्, यो बिस्तारै मार्चको मध्यमा तातो हुनेछ। मार्चको अन्तमा, तातो वसन्त daysतु दिन बढ्नेछ। यस समयसम्म ...
मार्चमा टोकियोमा मौसम (अवलोकन)
टोकियो मौसम मार्चको सुरूमै (२०१))
टोक्यो मौसम मार्च (२०१)) को बीचमा
टोक्यो मौसम मार्चको अन्तमा (२०१))
ग्राफ: मार्चमा टोकियोमा तापमान परिवर्तन
मार्चमा, न्यानो हावा दक्षिणबाट बग्दछ। यस कारणका लागि, हावा मार्चमा सामान्यतया बलियो हुन्छ। त्यहाँ धेरै बादल दिन छन् र यो धेरै वर्षा हुन्छ।
अधिकतम तापमान कहिलेकाँही २० डिग्री भन्दा बढि हुन्छ। यद्यपि यो पूरै वसन्त होईन। निम्न दिन कहिलेकाँही लगभग १० डिग्री गिराउन सक्छ र तपाईं चिसो संग कम्पन हुन सक्नुहुन्छ।
तातो र चिसो मौसम को एक चक्र को माध्यम बाट यो बिस्तारै वसन्त हुनेछ।
मार्चमा, मौसम अस्थिर छ र तापक्रम द्रुत गतिमा परिवर्तन हुन्छ। त्यसैले जापानी मानिसहरु पनि हरेक दिन के लगाउने भनेर चिन्तित छन्।
यदि तपाईं मार्चमा टोकियो यात्रा गर्नुहुन्छ भने, कोट वा जम्पर ल्याउनुहोस्। यदि तपाईं टोकियोमा हिड्दै हुनुहुन्छ र तातो महसुस गर्नुहुन्छ भने, तपाईंको कोट निकाल्नुहोस् र आफ्नो शरीरको तापक्रम मिलाउनुहोस्।
वर्षको यस समयमा जापानीहरू प्रायः सोच्दछन् "चेरी फूल कहिले फूल्दछ?" चेरी फूलहरू यस समयमा फूल फुल्ने तयारी गर्दैछन्। जब न्यानो दिनहरू मार्चको अन्त्यदेखि अप्रिलको सुरुसम्म लगातार मिल्दछ, सेरी फूलहरू तत्कालमा देखिन्छ।
अधिकतम तापमान (सेल्सियस) 21.2
न्यूनतम वायु तापमान 2.8
कुल वर्षा 152.0 मिमी
राम्रो मौसम अनुपात 43%
मार्च,, २०१ 6: भीडको घण्टामा सबवे स्टेशनमा रेलको आगमनको लागि लाइनमा उभिरहेका व्यक्तिहरू, मेट्रोमा टोकियो, जापान = शटरस्टक
जनवरी र फेब्रुअरीमा, मौसम टोकियोमा स्थिर धूप दिनको साथ एक लामो समयको लागि स्थिर छ। जे होस्, मार्चको शुरुमा मौसम अस्थिर हुन्छ र अधिक वर्षाका दिनहरू हुन्छन्।
यो मार्चको शुरुमा धेरै न्यानो हुन सक्छ। जे होस्, कृपया सावधान हुनुहोस् किनकि यो फेरि जाडोमा फर्किन सक्दछ।
मार्चको शुरुमा, टोकियोमा सूर्योदय समय करीव :6:०07 र सूर्यास्त समय १ 17: 39 around तिर हुन्छ।
अधिकतम तापमान (सेल्सियस) 22.1
न्यूनतम वायु तापमान 3.1
कुल वर्षा 14.5 मिमी
राम्रो मौसम अनुपात 51%
मार्च १२, २०१:: टुकिओ, जापान = ट्वाइटलाईटमा प्राचीन Asakusa मन्दिर र टोकियो स्काइट्रीको सुन्दर स्थलचिन्ह
मार्चको मध्यमा, कहिलेकाहीँ अप्रिल र मे जस्ता न्यानो दिनहरू हुन्छन्। धेरै दिनको तातो मौसम पछि, चेरी रूखहरूले फूल फुल्ने तयारी गर्न थाल्छ। यद्यपि, टोकियोमा, चेरी फूलहरू मार्चको मध्यमा प्रायः फल्ने हुँदैनन्। त्यहाँ चिसो दिन पनि छ त्यसैले तयार हुनुहोस्।
मार्चको मध्यमा, टोकियोमा सूर्योदय समय करीव 5::53 हुन्छ र सूर्यास्त समय लगभग १:17::48 हुन्छ।
अधिकतम तापमान (सेल्सियस) 24.2
न्यूनतम वायु तापमान 1.7
कुल वर्षा 53.5 मिमी
राम्रो मौसम अनुपात 65%
मार्च :०: थाई महिला मानिसहरु जापानी मानिस र विदेशी यात्रुहरु संग फोटो खिच्नको लागि फोटो खिच्दै मार्च ,०, २०१ 30 मा टोकियो, जापान मा शटरस्टक
मार्चको अन्त्य सम्ममा, टोकियोमा केहि न्यानो दिनहरू हुनेछन् र चेरी फूलहरू फूल्न थाल्नेछन्। हामी जापानी मानिसहरु लाई चेहरा फूल को फूल को लागी वसन्त आएको आभास छ।
मार्चको अन्तमा, टोकियोमा सूर्योदय समय करीव 5: 39 is र सूर्यास्त समय करीव १ 17:56 is हुन्छ।
※ सूर्योदय र सूर्यास्त समयहरू जापानको नेशनल एस्ट्रोनोमिकल वेधशाला द्वारा जारी गरिएको २०१ data डाटामा आधारित छन्। मैले मार्चको सुरूको लागि 2019th औं समय, मार्चको मध्यमा १5औं समय, र मार्चको अन्त्यको लागि २th औं समय पोस्ट गरें।
टोक्यो को बारे मा अधिक जानकारी को लागी, कृपया तलका लेखहरु मा हेर्नुहोस्।
>> जापानमा जाडो लगाउँनुहोस्! तपाईंले के लगाउनु पर्छ?
>> जापानमा वसन्त earतु! तपाईंले के लगाउनु पर्छ?
>> टोकियोमा गर्नु पर्ने उत्तम चीजहरू: आसाकुसा, जिन्जा, शिन्जुकु, शिबुया, डिज्नी आदि।
>> नरिता एयरपोर्ट! टोक्यो / अन्वेषण टर्मिनल १, २, to मा कसरी पुग्ने
"मार्च" मा फिर्ता